GỤỌ NKE Acholi Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Batak (Dairi) Batak (Toba) Bengali Biak Bicol Bislama Bulgarian Cakchiquel (Western) Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Chol Chuvash Cibemba Cinyanja Croatian Czech Danish Drehu Dutch Efik English Estonian Ewe Fijian Finnish Fon French Ga Georgian German Greek Greenlandic Guarani Gujarati Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hindi Hmong (White) Hungarian Iban Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Javanese Kabiye Kannada Kazakh Kikamba Kikaonde Kikongo Kikuyu Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisi Kongo Korean Krio Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Kwangali Kwanyama Latvian Lhukonzo Lingala Lithuanian Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Mam Mambwe-Lungu Marathi Mauritian Creole Maya Mazatec (Huautla) Mongolian Myanmar Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Northern Puebla) Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nias Norwegian Nyaneka Nzema Ossetian Otetela Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Punjabi Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Rarotongan Romanian Runyankore Russian Samoan Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Seychelles Creole Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Tagalog Tahitian Tamil Tatar Telugu Tetun Dili Thai Tigrinya Tiv Tojolabal Tok Pisin Tshiluba Tsonga Turkish Tuvaluan Twi Tzeltal Tzotzil Ukrainian Umbundu Urdu Urhobo Venda Vietnamese Wallisian Wayuunaiki Wolaita Xhosa Yoruba Zulu
Ò nwetụla mgbe ndị tigbuo zọgbuo mesiri gị ma ọ bụ onye ezinụlọ gị ike? Ò nwere ihe mere ka ụjọ ndị tigbuo zọgbuo na-atụ gị? Ọtụtụ ndị ekwuola na ndị tigbuo zọgbuo na-akpa ndị mmadụ aka ọjọọ taa karịa n’oge ndị gara aga. Legodị ihe ndị gosiri na ọ bụ eziokwu.
TIGBUO ZỌGBUO A NA-ENWE N’EZINỤLỌ NA IDINA MMADỤ N’IKE: Òtù Mba Ụwa kwuru na “e kee ụmụ nwaanyị niile ụzọ atọ, a kụọla otu ụzọ n’ime ha ezigbo ihe ma ọ bụkwanụ dinaa ha n’ike. Ndị mekwara ha ihe ndị a bụ ndị ha na ha dị n’ezigbo mma.” Ọ dị mwute na n’ihi otú ihe si na-aka njọ, Òtù Mba Ụwa kwukwara na “a na-atụ anya na n’ụwa niile, e kee ụmụ nwaanyị niile ụzọ ise, a ga-edina otu ụzọ n’ime ha n’ike ma ọ bụkwanụ anwaa idina ha n’ike.”
TIGBUO ZỌGBUO A NA-ENWE N’OKPORO ÁMÁ: Nchọpụta e mere gosiri na ihe karịrị òtù ndị tigbuo zọgbuo puku iri atọ na-enye ndị mmadụ nsogbu n’Amerịka. Na Latịn Amerịka, e kwuru na a kụọla ihe dị ka otu onye n’ime mmadụ atọ ọ bụla ihe.
MMADỤ IGBU MMADỤ IBE YA: E kwuru na n’afọ 2012, ndị ụmụ mmadụ ibe ha gburu ruru ihe fọrọ obere ka ọ bụrụ narị puku ise. Ha karịrị mmadụ ole nwụrụ n’agha ndị a lụrụ n’afọ ahụ. Ọ bụ n’Ebe Ndịda Afrịka nakwa n’Etiti Kọntinent Amerịka ka ndị mmadụ kacha gbuo mmadụ ibe ha. E gburu ihe karịrị otu narị puku mmadụ na Latịn Amerịka n’otu afọ, gbuokwa ihe dị ka puku mmadụ iri ise na Brazil. Ò nwere mgbe a na-agaghịzi enwe ndị tigbuo zọgbuo?
Ò NWERE MGBE TIGBUO ZỌGBUO NA-AGAGHỊZI ADỊ?
Gịnị mere tigbuo zọgbuo ji ju ebe niile? E nwere ọtụtụ ihe na-akpata ya. Otu n’ime ha bụ na o nwere ndị obi na-adịghị mma maka na ndị ọzọ ka ha n’ọkwá ma ọ bụ ka ha nwee ego. Ọzọ bụ na e nwere ọtụtụ ndị na-ejighị ndụ ndị ọzọ kpọrọ ihe, nweekwa ndị mmanya na ọgwụ ọjọọ na-akpa ike ọjọọ n’ahụ́ ha. Ọzọkwa bụ na ụmụaka ndị na-ahụ ka ndị toro eto na-alụ ọgụ na-achọkwa ime ka ha. Mgbe ụfọdụkwa, a naghị ata ndị tigbuo zọgbuo ahụhụ kwesịịrị ha.
Ma, e nweela ebe ụfọdụ n’ụwa ndị mmadụ gbara mbọ kwụsịlatatụ tigbuo zọgbuo. N’ime afọ iri gara aga, n’obodo Saụ Paụlo dị́ na Brazil, ọ bụrụ na mmadụ ole mmadụ ibe ha na-egbu bụbu iri n’otu afọ, ha bịara gbadaa bụrụzie abụọ n’otu afọ. Ma, tigbuo zọgbuo n’ụdị ya dị iche iche ka juru ebe niile n’obodo a. E nweekwa mmadụ puku iri nwụrụ n’obodo a, ọ bụ mmadụ gburu otu onye n’ime ha. Oleezi ihe ga-eme ka tigbuo zọgbuo kwụsị kpamkpam?
Tupu tigbuo zọgbuo akwụsị, ndị na-eme ya ga-agbanwe otú ha si eche echiche na otú ha si akpa àgwà. Ha ga-akwụsị ịdị mpako, imere ndị ọzọ anyaụfụ, na ịchọ ọdịmma onwe ha naanị, malitezie hụwa ndị ọzọ n’anya, na-asọpụrụ ha ma na-eche gbasara ha.
Olee ihe ga-eme ka onye tigbuo zọgbuo chọwa ịgbanwe ndụ ya otú a? Legodị ihe Baịbụl kwuru:
“N’ihi na nke a bụ ihe ịhụ Chineke n’anya pụtara, ka anyị na-edebe ihe o nyere n’iwu.”—1 Jọn 5:3.
“Ịtụ egwu Jehova pụtara ịkpọ ihe ọjọọ asị.” *—Ilu 8:13.
Ọ bụrụ na onye tigbuo zọgbuo ebido hụwa Chineke n’anya, na-agba mbọ ka ọ ghara ime ihe ga-ewute ya, ọ ga-eme ka ndụ ya gbanwee, ya emewezie ihe dị mma. Ma ụdị ihe a ọ̀ na-eme eme?
Legodị ihe mere otu nwoke aha ya bụ Alex. * A tụrụ ya mkpọrọ na Brazil n’ihi imesi ndị ọzọ ike. Ọ nọọkwala afọ iri na itoolu ugbu a na mkpọrọ. Ndịàmà Jehova mụụrụ ya Baịbụl, ya emee baptizim, ghọọ Onyeàmà Jehova n’afọ 2000. Ma ọ̀ gbanweela n’eziokwu? Ee. Alex na-akwa ụta maka ihe ọjọọ niile o mere. O kwuru, sị: “Ugbu a, ahụrụ m Chineke n’anya maka otú o si mee ka obi sie m ike na ọ gbagharala m. Ihe mere m ji gbanwee bụ maka na m hụrụ Jehova n’anya, chọọkwa ikele ya maka ihe o meere m.”
Na Brazil kwa, otu nwoke aha ya bụ Charles bụbu oji égbè ezu ohi. O bigidere ụdị ndụ ọjọọ a ruo ihe dị ka afọ iri na ise. Gịnị mere o ji gbanwee? Ndịàmà Jehova bịara zie ya ozi ọma mgbe ọ nọ n’ụlọ mkpọrọ, ya esorokwa ha mụọ Baịbụl. Charles kwuru, sị: “Mgbe mụ na ha malitere ịmụ Baịbụl ka ndụ m bịara nwewa isi. M bidoro hụwa Chineke n’anya. M bidokwara na-agba mbọ ka m ghara ime ihe ọ bụla ga-ewute Jehova. Achọghị m ime ihe ọ bụla ga-egosi na eji m obiọma Chineke meere m egwuri egwu. Otú a m si hụ Chineke n’anya ma na-atụ ụjọ ime ihe ga-ewute ya mere ka m gbanwee ndụ ọjọọ m na-ebibu.”
Mụtakwuo ihe ị ga-eme ka i ruo eruo ibi n’ụwa tigbuo zọgbuo na-adịghịzi
Olee ihe anyị na-amụta n’ihe ndị a ha kọrọ? Anyị na-amụta na Baịbụl nwere ike ịgbanwe otú mmadụ si eche echiche, mee ka onye ahụ mewe ihe dị mma. (Ndị Efesọs 4:23) Alex anyị kwuru okwu ya ná mbụ kwuru, sị: “Ihe m mụtara na Baịbụl bịara dị m ka mmiri dị ọcha e ji na-asachapụ echiche ọjọọ dị n’ime m nwayọọ nwayọọ. Echebughị m na o nwere ihe gaara eme ka m gbanwee.” N’eziokwu, ọ bụrụ na anyị ana-eche gbasara ihe ndị e dere na Baịbụl, ọ ga-ewepụ ma ọ bụ sachapụ echiche ọjọọ dị n’ime anyị. Okwu Chineke nwere ike ịsachapụ ihe ọjọọ dị anyị n’ime. (Ndị Efesọs 5:26) Ihe ọ pụtara bụ na ndị tigbuo zọgbuo na ndị na-eme ihe na-abara naanị onwe ha uru nwere ike ịgbanwe, nwewe obiọma ma na-emekwa udo. (Ndị Rom 12:18) Ha bido mewe ihe Baịbụl kwuru, ha ga na-enwe udo.—Aịzaya 48:18.
Ndịàmà Jehova dị́ ihe karịrị nde asatọ nọ́ na narị mba abụọ na iri anọ achọpụtala na ịhụ Chineke n’anya na ịgba mbọ ka ha ghara ime ihe ga-ewute ya na-eme ka ha dịrị n’udo. N’agbanyeghị na agbụrụ ha dị iche iche, otú ihe si dịrị ha nakwa otú e si zụlite ha dịkwa iche iche, ha na-ebi n’udo n’ụwa niile dị ka otu ezinụlọ. (1 Pita 4:8) Otú a ha si eme na-egosi na a ga-enweli mgbe tigbuo zọgbuo na-agaghịzi adị n’ụwa a.
TIGBUO ZỌGBUO GA-ALA N’OGE NA-ADỊGHỊ ANYA
Baịbụl kwuru na Chineke ga-akwụsị tigbuo zọgbuo n’ụwa a n’oge na-adịghị anya. Ihe na-echezi ụwa a tigbuo zọgbuo juru bụ “ụbọchị ikpe na ụbọchị mbibi nke ndị na-adịghị asọpụrụ Chineke.” (2 Pita 3:5-7) A gaghịzi enwe ndị tigbuo zọgbuo. Ma, olee ihe ga-eme ka obi sie anyị ike na Chineke chọrọ ịkwụsị tigbuo zọgbuo kpamkpam?
Baịbụl kwuru na Chineke “kpọrọ onye ọ bụla nke hụrụ ime ihe ike n’anya asị.” (Abụ Ọma 11:5) Chineke hụrụ udo na ikpe ziri ezi n’anya. (Abụ Ọma 33:5; 37:28) Ọ bụ ya mere na ọ gaghị ekwe ka ndị na-eme ihe ike ma ọ bụ ndị tigbuo zọgbuo nọrọ ruo ebighị ebi.
N’eziokwu, udo ga-adị n’ụwa niile n’oge na-adịghị anya. (Abụ Ọma 37:11; 72:14) Gbalịa mụtakwuo ihe ị ga-eme ka i ruo eruo ibi n’ụwa tigbuo zọgbuo na-adịghịzi.
^ para. 14 Aha a kpọrọ ụfọdụ ndị n’isiokwu a abụghị ezigbo aha ha.
Lee vidio bụ́ Ndụ M Gbanwere n’Ụlọ Mkpọrọ ka ị hụ ebe otu nwoke na-akọ otú ndụ ya si gbanwee. Ọ dị na www.jw.org/ig. (Gaa n’ebe e dere GBASARA ANYỊ pịa IHE NDỊ ANYỊ NA-EME pịzie IHE NDỊ ANYỊ NA-EMERE ỌHANEZE)
Ihe Baịbụl Kwuru Gbasara Tigbuo Zọgbuo
Olee otú Chineke si ele tigbuo zọgbuo anya? Ndị e ji tigbuo zọgbuo mara hà nwere ike ịgbanwe?
Nke 4 n'Afọ 2016 | Olee Otú Baịbụl Si Dịgide?
ỤLỌ NCHE Nke 4 n'Afọ 2016 | Olee Otú Baịbụl Si Dịgide?
Ndụ M Gbanwere n’Ụlọ Mkpọrọ
Ndụ M Na-ebi Gwụrụ M Ike